Google Drive gosiputara ihe ohuru ohuru nke sitere na ihe eji eme ihe | Akụkọ akụrụngwa
Google Drive weputara imewe ohuru
Edere Esteban | | General, Noticias
Ihe eji eme ihe abụrụla otu n'ime ogidi nke ngwaahịa Google. N'ihi ihe ngosi ndị a, ụlọ ọrụ ahụ na-agbanwe atụmatụ nke ọtụtụ ngwaọrụ ya. Anyị ahụla n’oge na-adịbeghị anya otú Gmail si gosipụta ọhụụ ọhụrụ. Ugbu a, obu uzo Google Drive, nke na-amaliteworị imewe ọhụụ. Ọzọ n'ike mmụọ nsọ site ihe Design.
Na mgbakwunye, imepụta ọhụụ anyị nwere ike ịhụ na Google Drive nwere ụfọdụ myirịta na okirikiri nhọrọ ukwuu na ẹkenam ke Gmail ndondo emi. Yabụ ị nwekwara ike ịhụ mbọ ụlọ ọrụ na-agba iji mepụta nkwekọrịta ụfọdụ n'etiti ọrụ ya.
Ọ bụ ezie na anyị nwekwara ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti atụmatụ nke nyiwe abụọ ahụ. N'ihi na n'ime nke a enweghị atụmatụ ọhụrụ ewebata. N'ihe banyere Gmail, e webatara atụmatụ ọhụrụ. Ihe na emebeghị ugbu a. Ma ọ dịkarịa ala, ọ mebeghị.
A mara ọkwa mgbanwe mgbanwe nke Google Drive n'oge ememme Google I / O 2018. Ihe omume nke ụlọ ọrụ America na-ahapụ anyị na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ akụkọ na ngwaahịa na ọrụ ya. Ihe na - emekwa na igwe ojii ya ebe nchekwa ya.
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịhụlarịrị ọhụụ Google Drive ọhụrụ mgbe ha nwetara ya. Mana n'ọtụtụ ọnọdụ, egosighi ya. Obu ihe kwesiri ime n’oge na adighi anya, ọ bụ ezie na ọ nweghị ụbọchị ọ bụla edepụtara aha maka mgbanwe a.
Ihe doro anya bụ na anyị na-ahụ otú Google na-agbanwe usoro ya iji rube isi na ntuziaka ihe eji emepụta ihe. Ya mere, anyị na-ahụ ụfọdụ myirịta dị n'etiti atụmatụ ndị ụlọ ọrụ na-eweta. Ihe na-achọ ime ka ọ dịkwuo mma maka ndị ọrụ iji ọrụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ America.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Google Drive weputara imewe ohuru
Google Duplex gafere ule Turing dị anya